NgoLwesibini, Julayi 23, 2019
Qala blog Umlambo ofile (kwakhona)
17. Disemba 2017
Imbali yeSalmon yokufama yaseNorway
Ibali lihlazo kubantu nasezilwaneni.
Kunyaka ngamnye ngaphambi kweKrisimesi, i-salmon ayikho intlanzi ethanda intlanga yamaJamani. I-Salmon iyajongwa kuyo yonke i-EU. I ziphumo.
Nangona kunjalo, esi sihloko sidinga ukuxoxwa ngaso.
Ukuba kwakungekho nxu lumano lwamaqumrhu e-Cyprus, eNorway naseChile, ingozi kubathengi iya kuqikelelwa. Akunjalo. Kuthetha ngenzuzo, kungekhona intlanzi okanye kwimeko, ezolimo. Yonke into inenzuzo.
I-Salmon yintlanzi enonkqisayo kwaye inondlo enomdla wayo onokubangela ukuba uphuculo lube negalelo lokuphila ngendlela enempilo.
Kwakulungile ukuba, ukuba kunokwenzeka, kufuneka udle iintlanzi ubuncinane kathathu ngeveki.
I-aquaculture ifama i-salmon ngekhefu iye yalahlekelwa ezininzi zezondlo ezifunekayo, kwaye enye inokukhatheka ukujonga ukubunjwa kweentlanzi ze-salmon efama.
Iintlanzi ezidliwayo azikwazi ukutyalwa ngezondlo zemfuyo, i-antibiotics kunye nezinye iibhokhwe ezibonakala zibangela ukuba isilwanyana sifinyelele kwisisindo sokuxhoma ngokukhawuleza kunokuba sisendle.
Indalo yendalo ngundoqo
media kasaan, ngoNovemba 2017
Ehlane, kwimifula yaseNorway, yiyo Fisch esongelwa ukuphela.
Imihlaba efile eyachongelwa yi-pesticides kunye ne-penicillin-yiloo nto ama-aquacultures aseNorway ayawaqonda ngayo isimo sengqondo seefama ze-salmon. Enyanisweni, bekuya kuba isizathu esibalulekileyo sokuba iBrussels ingenele ngokukhawuleza ukuba, ngokweengxelo, abathengi abanesifo esinetyhefu - kulo mzekelo, akunjalo.
Umlambo womntu ofileyo
Kodwa eBrussels inqanaba Ukukhuselwa kwezilwanyana ezinambuzane.
Wonke umntu uyazi, wonke umntu ubheka kude.
yasemanzini ingaba isisombululo malunga nokutya kwindlala kunye nezoshishino, kodwa kungekhona i-salmon.
Kubonakala ngathi yinkqubo yokuzixhasa eyona nto, iinjongo "zegolide zegolide", nangona wonxweme lonke libhekwa njenge "golide yam" "Moonscape Kwamanzi" ushiye kwiizwekazi ezininzi.
Iimitha eziphezulu zemitha zodaka phantsi kwamaqhekeza kunye neentlanzi ezibekiwe. Amagumbi axhomekeke ekujuleni kweemitha ezili-40, apho izilwanyana zinomhlobo "umanyoloYondliwa.
Iintlobo zithe tye ezidala kwaye ezinye izifonjengoko kwenzululwazi yakutshanje.
Ezi meko kunye nokunyuka kwemali kwenza izilwanyana zibe ngumngcipheko ongenakwenzeka kubantu nakubume.
Ziziphi izitshintsho ezinokubangelwa kwi-salmon efama, umntu unokuqiqa nje. IYunivesithi yaseBergen yabhala ngaphezu kwengxelo yokungaphumeleli kwe-salmon aquaculture.
Nazi ezinye iinkcazo ezimbalwa ngesiNgesi:
Ukusetyenziswa rhoqo kwe-salum efama equkethe ukungcola kwezinto eziqhubekayo kubangelwa ukunganyangeki kwe-insulin kunye nokukhuluphala kwiimiceba kwilingo
Ukusetyenziswa okuphezulu kwe-salmon efama akuphazamisi imeko eqhubekayo yokungcola okungcolileyo (POPs) kwiplasma yomntu kunye neestipose tissue
Imigangatho yokuphendula ngokukhula kwimizalwane ye-salmon yasekhaya yase-Atlantic yasekhaya yasekhaya yaseAlanti, ngokuphendula kwimimandla eyahlukeneyo yentlalo kunye nemvelo
Akukho mntu ufuna ukuzonwabisa ngakumbi nge-salmon evela kwiNorway aquaculture. Abaninzi bendalo baseNorway bajonga ukuba i-salmon ayifanelekanga ukuyisebenzisa. Elula, indlela enobuthi.
Ibali elaliboniswe ngexesha lophando kufuneka libe yinto ekhangayo. Ngelishwa, ibali lenzeke iminyaka ngemeko.
Ininzi yesayensi, kodwa ayiyiyo inkolelo.
Phantse akukho salmon esele emlanjeni
Akunakutsho ukuba abaqalisi bekkoko-ntlalontle ngexabiso lempilo yabathengi bafumana "impumlo yegolide". Yimalunga nenzuzo ephezulu, i-Euro yokukhawuleza kunye nasemva kwezilwanyana zasendle isalathiso silandela kwisigaba sesibini se "Dead River"
Inqaku langaphambiliInqaba yeTrump
Uhlaziyo: Ibhulogi yeSalmon I-Great Deying of Crustaceans (kwakhona)
EUR 4.698,00 (I-8 bids)